घट्यो अण्डाको मूल्य , हेर्नुहोस् कतिमा झर्यो त ? – Ap Nepal
सधैँ उता’रचढाव भइरहने कुखुराको अण्डाको मूल्य घटेको छ । उत्पा’दन बढेको र खपत घटेसँगै मूल्यमा गिरावट आएको हो । स्वस्थानी व्रतकथा शुभारम्भ भएसँगै उप’भोग घटेको छ । कोरोना सङ्क्रमणसँगै चल्लाको अभावमा हुँदा अण्डा दिने कुखुराको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो । पछिल्लो समय नयाँ कुखुरा बढेसँगै उत्पा’दन बढेपछि मूल्य घटेको नेपाल अण्डा उत्पा’दक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले जा’नकारी दिनुभयो ।
अण्डाको मूल्य बढेका बेला बुढा कुखुरा बिक्री नगरेका का’रण पनि उत्पा’दन बढी भएको उहाँको भनाइ छ । सामान्यतया अण्डा दिने कुखुरा एक वर्ष छ महिना पाल्ने गरिन्छ । अण्डाको मूल्य बढ्दा किसानले थप एक वर्षसम्म पाल्ने गरेको उहाँ’को भनाइ छ ।
मूल्य घटेसँगै कृषक प्रभा’वित बनेका छन् । सङ्घले माघ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ठूलो अण्डा फार्म दर प्रतिक्रेट (३० वटाको) ३२५ र मध्यम रु ३०० कायम गरेको छ । यसअघि ठूलो अण्डा’को दर रु ३६० र मध्यम अण्डाको रु ३४० सम्म पुगेको थियो । केसीले भन्नुभयो, “उत्पादन बढी र खपत घटेकै कार’ण अण्डाको मूल्य घटेको हो ।”
यो दररेटमा अण्डा बिक्री गर्दा खर्च धान्न मुस्किल हुने किसानको भनाइ छ । अण्डा उत्पा’दक किसान मदन पोखरेलले एउटा अण्डा उत्पा’दन गर्न रु ११.५३ लागत लाग्ने बतउँदै यो दररेटमा बिक्री गर्दा किसानलाई घाटा हुने बता’उनुभयो । उहाँका अनुसार अहिलेको दररेटमा बिक्री गर्दा झण्डै रु एक प्रतिवटा अण्डामा किसानले नोक्सा’न व्यहोर्नु परेको छ ।
उपभो’क्ताले भने सस्तो मूल्यमा अण्डा उपभोग पाएका छैनन् । उपभोक्ताले भने रु १५ मा अण्डा खरिद गर्न बाध्य छन् । विचौलियाले बढी नाफा खाएर उपभो’क्तालाई महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले समन्वय गर्न नसक्दा उप’भोक्ता ठगिएका छन् ।”
सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रह’नुभएका किसान किरण ओली बजारमा अण्डाको माग भइरहेको भए पनि व्यव’सायीको चलखेलका कारण मूल्य घटेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “म सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्दिनभन्दा मसँग एक हजार ५०० पेटी अण्डा थन्किएको छ ।” अहिलेको अव’स्थामा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भए पनि व्यवसायीको चलखेललाई केही किसानको सह’योगका कारण समस्या आएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
घाटामा व्यव’साय गर्दा कुखुरा पाल्ने किसा’न निकै घटेको उहाँको भनाइ छ । दुई हजार ७०० हाराहारी लेयर्स कुखु’रा पाल्ने किसान रहेकामा यो सङ्ख्या’ घटेर एक हजार ७०० मा झरेको उहाँले जान’कारी दिनुभयो । ओलीले भन्नुभयो, “साना किसान विस्था’पित र ठूला स्थापित हुँदैछन् ।”
हाल दैनिक दे’शभरमा ३२ लाख वटा अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । केही महिनाअघिसम्म यो सङ्ख्या २६ लाख हाराहारी रहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपालमा कु’खुराजन्य क्षेत्रमा रु १ खर्ब २५ अर्ब लगानी भएको व्यव’सायीहरु बताउँछन् । – न्यूज24 बाट
Prevकक्षा ८ मा पढ्दा-पढ्दै कि,ड्निको दुइपटक अप्रेशन गरेका सन्तोश देउजाको सबैलाइ रु’वा’उने कथा उनकै मुखबाट (हेर्नुस भिडियो सहित)
Nextश्रीमानले छोडे, ८ बर्षको छोरालाई व्लड क्यान्सर भयो, बचाईदिनुस भन्दै आमासँगै छोरा पनि धरधरी रोए (भिडियो सहित)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (115526)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (66976)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (43868)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (35188)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (34494)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (31930)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (31012)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (29016)
लाहुरे राहुल र स्मिताको बारेमा शिशिर भण्डारीले रु; दै यस्तो भने । शिशिरको मनैछुने स,न्देशले सबैलाई रुवा;यो (भिडियो हेर्नुस) (24550)
७० बर्षका श्रीमान २० बर्षीय श्रीमतीको जोडी टिक-टकमा यसरी रम्दै सिरियलमा खेल्न अफर(भिडियो सहित) (23623)
“नाम मात्रै कमाएर हुन्छ बिवाह गरेर सन्तान जन्माउनु पर्दैन”, गायक राजेश पायल राइकी हजुरआमाको द’वाव (भि, डियो सहित)
गायिका शान्ति श्री परियार पहिलोपटक मिडियामा,आमालाई सम्झेर अन्तरबार्तामै आँ;सु झारीन (भिडियो सहित)
नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ बिदेशी मुद्राको बिनिमय दर ….
एउटी युवतीले दुई जना युवकसँग विहे,बिहेको फोटो देखाउदै युवकहरू “मेरो श्रीमती हो” भन्दै एकसाथ मिडियामा आएपछि.(भि:डियो सहित)